Xaaskaaga hadaa meelahaan ka dhuuqdo kacsi dartiis hawadeey galeysaa? - iftineducation.com
Xaaskaaga hadaa meelahaan ka dhuuqdo kacsi dartiis hawadeey galeysaa?
aadan21 / March 11, 2017
iftineducation.com – Hadalka naxariista iyo sheekada ham hamta (Sheekada Macaan) ayaa ah talaabada ugu horeeysa ee Weerarka Galmada , waxaana la tilmaamay xitaa xaaska mudda dheer la qabo marka sheekada macaan ee xod-xodashada maqasho in ay jiriricooto kadibna si tartiib tartiib ah aad ugu biloowdo Dhuuqmada dhanka Bishimaha faruuryaha.
Dhuuqmada waxaa ugu macaan in labada raaxeysanaya midba mid kale hal bishin ka dhuuqo tusaale in ninka dhuuqo bishinta hoose ee haweeneyda halka iyaduna ay ay si xaaso ay ku dheehantahay ay u dhuuqeyso midda sareeysa.
Waxaa xusid mudan in dhuuqmada ay dhowr nooc kala leedahay waxaana ugu macaan midda sida aayarka la isku daliigo iyadoo la isku xan-xanteeynayo.
Ragga ayaa lagula talinayaa in ay ogaadaan in haweenki jecel yihiin dhuuqmada in bishinta hoose si macaan looga nuugo iyadoo
gaarta in ay soo buurato markaasna si yar ilkaha ugu riixaya , waxaana la doonaya in uu uga jaqo sida in uu malab dhuuqayo oo kale
Xubinta Ugu Muhiimsan Dhuuqmada Ibta Naaska.
Haweenka kacsi waali ah ayay ka qaadaan iyo istiimin aad u macaan marka si toos looga nuugo ibta hore ee Naaska iyioo si khafiif ah ilkaha ugu qabanaya sida adigoo wax qaniinaya oo kale.
Sidoo kale Haweenka qaar waxeey raaxada ka helaan Dhunkashada xabdka gaar ahaan inta u dhaxeyso labada Naasood iyo cambarada qoorta kadibna gacanta mar mari Xubinta taranka haweenka iyadoona ay ka dhalaneyso raaxo Waali ah.
Fikirka Qaldan Ee Galmada Ee Dumarku Ku Fikiraan, Gabaryahay Iskal Ilaali
Hay’adda Qadar Kheyriyah oo Daahfurtay Mashruuc lagu Gargaarayo Dadka Abaaruhu Saameeyeen
Erayo Jaceyl ah:-Nolosheedawaa adi iyo erayo Calaacal Soo jiidasho leh